အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 26 ဆင် Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇူလိုင်လ 7, 2016
တက်တူးအဖြစ်အသုံးပြုတိရိစ္ဆာန်များ၏လူကြိုက်များနှစ်ပေါင်းများစွာတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့ကဆင်, ခြင်္သေ့နှင့်အခြားသောတူသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်မေတ္တာတိရိစ္ဆာန်များအခါနဲ့ဆက်စပ်မရအမျိုးမျိုးသောဝိသေသလက္ခဏာများဖော်ကျူး။ တိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ကမ္ဘာ့အကြိုက်ဆုံးတက်တူးတချို့ကတော၌ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များမှလာကြ၏။
ဆင် Tattoo ဓိပ်ပာယျ
# ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆင်တက်တူး ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးကိုကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ဆင်ငြိမ်းချမ်းရေး, တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အာဏာကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆက်သွယ်ရေး, ပညာ, အကောင်းကံများနှင့်အောင်မြင်မှုအဘို့ရှာသောသူတို့၌ရန်သင်္ကေတဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများကိုဆည်းကပ်, ထည့်သွင်းစဉ်းစား, သည်းခံခြင်းနှင့် chastity အဖြစ်ယူနေချိန်မှာတချို့လူတွေကကလေးမွေးဖွားအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။
ဆင်လည်းတိမ်နှင့်သာယာဝပြောရေး, nobility, ပျော်ရွှင်မှုကို, မှတ်ဉာဏ်, ပြဌာန်းခွင့်နှင့် invisible နှင့်အတူတွဲပြီးစဉ်းစားနေကြသည်။ ဆင်တက်တူးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာ။ သို့သော်ထိုသို့ #tattoo ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဆုံးဖြတ်တစ် wearer ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက်တူးထိုးချစ်သောသူလူတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုမှ preference ကိုရှိပြီးသူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးနေကြသည်သောအရပ်မှာတက်တူးထိုး၏အသုံးချနေတဲ့သာသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆင်သာယာဝပြောရေး, မှတ်ဉာဏ်, ကိုယ်စားပြုတယ် ?? ပျော်ရွှင်မှု, ?? Nobility, ?? ပြဌာန်းခွင့်, ဘယျသူမှမအောငျနှင့်သနားကြင်နာခြင်း။
ပါဝါ, ခွန်အား, အောင်မြင်မှု, မိသားစု, ရပ်ရွာ, မိခင်, Good Luck, ပညာ, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆင်တက်တူးထိုး၏ကိုယ်စားပြုမှုတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဆင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်၌ရှိကြသောတက်တူးထိုးချွတ်ပြသချင်သောကြောင့်လာပါခံစားမှု။ အဆိုပါနေရာချထားကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ပြုမိနိုင်ကြရနိုငျသောအကောင်းဆုံးသောသတ္တဝါများတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရေးဆွဲနိုင်သည့်နေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
1. အံ့သြဖွယ်လက် ယောက်ျားလေးများအဘို့အဆင်တက်တူးမင်
2 ။ လူတို့သညျအဘို့အ Bicep ဆင်တက်တူးစိတ်ကူး
ရာထငျစခေဲ့သောသူတို့အဘို့အကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့ချင်းစီအချိန်ရတဲ့ရပ်တန့်မနိုင်သူတွေကိုရှိပါတယ်။ ကကြောက်မက်ဘွယ် #design သင်ဤတက်တူးများကဲ့သို့ဦးခေါင်းလှည့်စေမယ်လို့ကြောင်းကိုရှိခြင်းမှကြွလာသောအခါသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါသနည်း
3 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အအေးမြပေါင်ဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
သငျသညျလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးအရာသုတေသနပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အစဉ်အဆက်ဆိုးဆိုးရွားရွားရေးဆွဲသောတက်တူးထိုးရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွှတ်သွားကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါအရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စိတ်ဒဏ်ရာသင်သည်သင်၏ရန်သူဆန္ဒရှိချင်မပြုစေခြင်းငှါအရာဖွစျသညျ။
4 ။ အရွက်နှင့်ဆင် အမြိုးသမီးမြားပေါင်များအတွက်တက်တူးမင်စိတ်ကူး
ဤကဲ့သို့သောတက်တူး drawing အတွက်ကောင်းသောနေသောလူမျိုးတွေ့ဆုံသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်လိုအပျကွောငျးရလဒ်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သမျှဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ထံမှရွေးချယ်ဖို့အဲဒီမှာဒီဇိုင်းများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာထွက်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဒီရက်အလွန်တတ်နိုင်သောဇိမ်ခံဖြစ်လာသည်။
5 ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဆင် အမျိုးသမီး biceps အပေါ်တက်တူးမင်
အမျိုးမျိုးသောတက်တူးအပေါ်အထူးပြုကြသူဒီဇိုင်နာများရှိပါတယ်။ သငျသညျကိုယျအဘို့ပွုနိုငျသညျကောငျးသောအရာကဒီတက်တူးအတွက်အထူးပြုသူအနုပညာရှင်တစ်ဦး get ရန်ဖြစ်ပါသည်။
6 ။ နှင်းဆီနှင့်မင်းသမီးအဘို့အဆင် bicep တက်တူးစိတ်ကူး
နှစ်တွေကလူတက်တူးထိုးဘို့အသွားစတင်ခဲ့ပါပြီ။ သင်ယူခြင်းကြသူအနုပညာရှင်များအတွက်မသွားပါစေနဲ့။ သင်ဤကဲ့သို့ကောင်းသောမကြည့်မယ်လို့တက်တူးထိုးရပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုသို့ပြုမှတစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။
7 ။ မင်းသမီးအဘို့ပခုံးဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
သင်အွန်လိုင်းကနေရှေးခယျြနိုငျကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများရှိပါတယ်။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, သငျသညျအရပျထဲကခံစားမိသွားကြသည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့ကလူကိုသင်အွန်လိုင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများနှိုင်းယှဉ်ကူညီရန်အကြီးအတက်တူးဆိုင်တွေသွားရောက်အကြံပြုသည်။
8 ။ မင်းသမီးပခုံးပေါ်မှာအပွင့်နှင့်အဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
9. သံလိုက်အိမ်မြှောင် နောက်ကျောမိန်းမတို့အဘို့နှင့်ရောင်စုံဆင်တက်တူးမင်
အနုပညာရှင်တစ်ဦး၏လုပျငနျးလူတစ်ဦးတက်တူး drawing မှာကောင်းသောကြောင်းကိုသင်သည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမယ်လို့အရာဖြစ်တယ်။
10 ။ နောက်ကျောမိန်းမတို့အဘို့ချစ်စရာပန်းပွင့်နှင့်အဆင်ဒီဇိုင်း
11 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အသံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့ဆင် biceps တက်တူးဒီဇိုင်း
12 ။ cool ဆင် ခြေထောက်ပေါ်တက်တူးဒီဇိုင်း
13 ။ မင်းသမီးအဘို့အဆင်ပခုံးတက်တူးမင်
14 ။ ချစ်စရာဆင် အမျိုးသမီးလက်ပေါ်မှာတက်တူးထိုးဒီဇိုင်း
15 ။ မိန်းကလေးများပခုံးပေါ်မှာအပွင့်နှင့်အဆင်တက်တူးမင်စိတ်ကူး
အိန္ဒိယမှာတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြင်နာမှုနှင့်ဘုရားကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ ဒါကြောင့်ဆင်တက်တူးမှကြွလာသောအခါ, ဆင်၏အရောင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုအသုံးပြုကြသည်ရှိရာအချို့တိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူဘဲပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ဒီတက်တူးများအသုံးပြုမှုသစ္စာနှင့်အသက်ရှည်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုကဒီတက်တူးဒီဇိုင်းအဘို့အသွားအဘယ်ကြောင့်ယခုသင်သိကြ၏။
16 ။ အမျိုးသမီးလက်ပေါ်ရတနာနှင့်ဆင်တက်တူး
သမ္မာတရားကိုဆင်တက်တူးသည်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကဲ့သို့လူကြိုက်များဖြစ်လာမရဖြစ်လာကြပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဒီတက်တူးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လျှင်သင်အံ့သြပါသလား? ဟုတ်ကဲ့! လူတို့သညျဆင်တက်တူး၏လူကြိုက်များအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အမျိုးသမီးတွေနေဆဲထိုသို့သွားပါ။
17 ။ လူတို့သညျအဘို့အစူပါအပြည့်အဝရင်ဘတ်ဆင်တက်တူးစိတ်ကူး
သင့်ရဲ့အနုပညာရှင်သည်ကောင်းပါက, သူသို့မဟုတ်သူမရိုးရှင်းစွာလက်ချောင်းများသို့မဟုတ်ခြေဆစ်အပါအဝင်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုစိတျအပိုငျးသို့ fit ဖို့ဆင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
18 ။ ရိုးရှင်းသောဆင် ယောက်ျားလေးများလက်မောင်းပေါ်တက်တူး
သငျသညျအခြို့သောကြောင့်အက၎င်း၏ဗေဒတန်ဖိုးကို၏ဤတက်တူးထိုးဘို့အသွားကြောင်းမေ့လျော့မပေး, ဒီတက်တူးထိုးဘို့အသွားသူအချို့လူများ, ဝိညာဉ်ယုတ္တိသို့မဟုတ်ပင်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူတစ်ဦးနှင့်အတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသင်းကိုပြုမည်ကိုနားလည်သင့်တယ်။
19 ။ အမျိုးသမီးနောက်ကျောအပေါ်ချစ်စရာဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
20 ။ ပခုံးအဘို့အအံ့သြဖွယ်ဆင်အထီးတက်တူးမင်
သငျသညျအစဉျအမွဲကသုံးပြီးစဉ်းစားမတိုင်မီသင်ကတက်တူးထိုးအပေါ်အချို့သောသုတေသနလုပ်ဖို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ခြွင်းချက်ဖြစ်ရန်သင့်ဆင်တက်တူးတွန်းအားပေး၏နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကသာအချိန်နှင့်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့တက်တူးထိုးဆွဲရန်ကိုသိရှိသူတစ်ဦးပါရမီရှင်အနုပညာရှင်၏လက်ကြာပါသည်။
21 ။ နောက်ကျောမိန်းမများအဘို့အအသေးစားဆင်တက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
22 ။ ယောက်ျားပခုံးများအတွက်လက်သည်းများနှင့်ဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, သငျသညျလိုအပျကွောငျးဒီဇိုင်းကောက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ဆင်သက်သေခံပစ္စည်းများကိုအပြည့်အဝမဆိုကောင်းသောတက်တူးထိုးအပေါ်ဖော်ကျူးနိုင်ဂုဏ်အသရေ။
23 ။ ယောက်ျားရင်ဘတ်များအတွက်အံ့သြဖွယ်ဆင်တက်တူးဒီဇိုင်း
24 ။ မိန်းကလေးတစ်ဦးလက်မောင်းပေါ် cool ဆင်တက်တူးမင်စိတ်ကူး
ဒီတက်တူးထိုးနှင့်သင်၏တက်တူးထိုးကြေညာချက် Make နှင့်လူများကမှာကြည့်သည့်အခါချွတ်ပြုံး။
25 ။ လက်ရုံးကိုအဘို့အနီမျိုးစုံနှင့်ဆင်တက်တူးစိတ်ကူး
26 ။ ဆင် မင်းသမီးအဘို့အစွပ်အိတ်တက်တူးဒီဇိုင်း
ပိုပြီးဆင် Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အသင်္ချေတက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးအစ်မတက်တူးလတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများrip တက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးချစ်စရာတက်တူးငှက်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးကြောင်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းမျက်စိတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးFeather Tattooကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးစုံတွဲတက်တူးလက်တက်တူးနေရောင်တက်တူးစိန်တက်တူးမြှားတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးခြေလျင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးKoi ငါးတက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးဟင်္တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးတက်တူးထဂီတတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးခြေကျင်း Tattoosလက်တက်တူးနှလုံး Tattoosဂျီဩမေတြီ Tattoosလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးဆင်တက်တူးပန်းချီတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူး